“Labo Maalmood ayaan ku dhex ooynayay Gurigeyga.” – Neymar – Gool FM
“Labo Maalmood ayaan ku dhex ooynayay Gurigeyga.” – Neymar
Dajiye February 20, 2019
(PSG) 20 Feb 2019. Xidiga reer Brazil ee Neymar Jr ayaa shaaca ka qaaday sir ku aadan inuu mudo labo maalmood ku dhex ooynayay gurigiisa.
Wargeyka “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu Neymar Jr ku xaqiijiyay in mudo 2 maalin ah uu gurigiisa ugu dhex ooynayay, kadib dhaawacii uu la kulmay 23-ka bishii lasoo dhaafay ee Janaayo.
“Waxaan qabaa in dhaawaca waqtigan uu ahaa mid ka adag, kii kasii horeeyay”
Xidiga reer Brazil ayaa la kulmay dhaawac xili ciyaareedkii hore, taasoo ka dhigtay in garoomada uu kaga maqnaado mudo dhan 3 bilood, laakiin dib ayuu garoomada ugu soo laabtay wuxuuna ka qeyb galay koobkii aduunka 2018 ee ka dhacay dalka Russia.
“Dhaawacii hore waxaan sheegay inaan diyaar u ahay in qaliin la igu sameeyo, si xalka ugu dhaqsaha badan loo gaaro, mana jirin wax murugo ah”.
“Laakiin markan, waxay igu qaadatay waqti si aan u aqbalo arintan, waxaan mudo laba maalmood ku ooynayay gurigeyga”.
Si kastaba Neymar Jt ayaa la filayaa in uu garoomada ka maqnaado ilaa isbuuca ugu horeeya ee bisha April.
RASMI: Sadio Mane oo noqday Weeraryahanka ugu fursad khasaarinta badan Champions League...(Arag Liiska 10-ka..)
Gareth Bale wuxuu doonayaa Manchester United balse Real Madrid waxay la doonaysaa inuu ku biiro Chelsea si ay u hesho…